ထပ်ညွှန်းတင်တဲ့ အသဲကွဲကဗျာ | PoemsCorner
ကဗျာမဟုတ်ပါ ရစ်သမ်မှားတဲ့မိုနိုလော့ဂ် Professional Authors
ထပ်ညွှန်းတင်တဲ့ အသဲကွဲကဗျာ	Tweet	ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတော့ ဘာကိုမှနောင်တမရချင်တော့ဘူး…နောင်အချိန်မှာထပ်မဖြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားရမှာအမှန်ပေါ့….။
သုည နဲ့ မခြား တဲ့ ဘဝမလိုချင်လို့ ပစ်မှတော့ဘာများထပ်ပြီး စိတ်ညစ်နေရဦးမှာလဲ…အကွဲကွဲအပြဲပြဲ နဲ့ဖယိုဖရဲ အသည်းတစ်ခြမ်းကိုပဲလက်မှာ စွဲလို့ လှည့်ထွက်ခဲ့တယ်….ငါရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကို ကုသဖို့အတွက်ဆေးဆရာ အသစ်ရှာရမယ်လေ….။
တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်တွလိုရက်ပေါင်းများစွာပြောတာမဟုတ်ပေမယ့်…နင်ခဏလေးပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကတော့ငါ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာပဲလေ….နင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေ အထမြောက်ခဲ့တာပေါ့….။
ကျေနပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တော့မယ်…ဒဏ်ရာ အနာမကျက်သေးလို့သာရက်တွေကြာခဲ့ရတာပဲကွာ…နင့်အတွက်နဲ့ လူးလိမ့်နေရလောက်အောင်နင်က …ပပဝတီမဟုတ်သလိုငါကလည်း…မင်းကုသ မဟုတ်ဘူးလေ……..။
စီးတော်မြင်းကတော့ မင်းနောက်ကိုအမှီလိုက်နိုင်ပါတယ်…ငါကိုယ်တိုင်စိတ်မရှိလို့မလိုက်တာကိုတော့နင့်ကိုနင် ခေါင်းမထောင်နေနဲ့…။
ကိန်းတစ်လုံးကိုတင်တဲ့ ထပ်းညွှန်းကတန်ဖိုးမြင့်စေဖို့ဖြစ်ပေမယ့်ငါ့ဘဝ အပေါ်တင်တဲ့အချစ်ထပ်ညွှန်းကတော့သုည ဖြစ်နေခဲ့လို့ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ပါဘူးးးး……..။ ။(ဒီလောက်ဆိုရင် နင်ကျေနပ်တယ် မဟုတ်လား..?)
အသဲကွဲသမား သက်တံ့ပြယ်ချိန် အသဲကွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ အသဲကွဲတမ်းချင်း (၂) ထိခိုက်မှု ကျွန်တော့်ကောင်မလေးသို့ Leave comment
& 1,421 views	Comment #1 ကိန်းတစ်လုံးကို
ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ပါဘူးးးး……..။ ။
(ဒီလောက်ဆိုရင် နင်ကျေနပ်တယ် မဟုတ်လား..?)
By: pome.poem28 at Jul 11, 2011
Comment #2 အကိုရဲ့ ကဗျာတွေက လိုက်မမှီနိူင်ဘူးဗျာ စကားလုံးတွေရွေးတာ သိပ်လှတယ်၊၊
By: နေသွေး at Jul 11, 2011
Comment #3 အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ
By: HEROSMITH at Jul 11, 2011
Comment #4 Excellent ..
By: May Kha at Jul 11, 2011
Comment #5 အားပေးတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ……။ By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jul 11, 2011
Comment #6 ဒီကဗျာလေးလည်း အရမ်းကောင်းပါတရ်.. အားပေးခဲ့တရ်နော်..မောင်လေး.. ..
By: sandi at Jul 11, 2011
Comment #7 ကျေးဇူးတင်တယ်.. အစ်မစန္ဒီရေ…..။
By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jul 11, 2011
Comment #8 သုည နဲ့ မခြား တဲ့ ဘဝ
ငါရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကို ကုသဖို့အတွက်
အကြိုကဆုံး စာသားတွေပဲ သူငယ်ချင်းရေ……။
By: အောင်ရဲသူ at Jul 11, 2011
Comment #9 ကျေးဇူးတင်တယ် သယ်ရင်း…..။ By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jul 11, 2011
Comment #10 နင်က …
By: virus at Jul 13, 2011
Comment #11 ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…. Virus..။
By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jul 13, 2011